Wonke amazwe anabo abokufika – Bayede News
IZIGIGABA zakamuva zokuhlaselwa kwabokufika iNingizimu Afrika
Ayikho indawo efana nekhaya: AbaseNigeria abaqome ukuphinda ekhaya Isithombe: nguFemi Awoniyi
IZIGIGABA zakamuva zokuhlaselwa kwabokufika iNingizimu Afrika esiyaziwa ngazo zizohlala njalo ziqubuka ngoba uHulumeni neqembu elibusayo bayanyanyalata uma kumele babhekane ngqo nalesi simo ngoba basuke bebheke ukuthi abantu bangabalahli ngesikhathi sokhetho.
Okunye abasuke bekubhekile ukuvikela isithunzi sezwe ukuze kungakheki isithombe esimbi ekubeni laziwa ngokuba yisibonelo esihle ngenxa yoMthethosisekelo walo nokuba nozinzo kwezepolitiki.
Lona ngumuzwa kubantu bakuleli nabokufika okubonakale bevumelana ngawo ngesikhathi iBAYEDE ixoxisana nabo ezingxenyeni ezehlukene edolobheni iHillcrest izolo njengoba isashisa ibunzi eyokuhlaselwa kwabokufika.
“Ngifike eNingizimu Afrika ngowezi-2016, bengingeyena umuntu olandela izindaba namaphephandaba ukuthola ngokwenzeka ezweni, kodwa izigameko zokuhlaselwa kwamabhizinisi abokufika zingenze ngashintsha ngalandela konke okwenzeka ezweni,”. Lawa ngamazwi kaKingombe Whembolua osebenza endaweni edayisa ukudla kuleli dolobha kodwa ohlala Embo ngenxa yokusondezela umsebenzi. UWhembolua okhuluma ulimi lwesiTshiluba aluncela ebeleni usuka eButembo. Uthi ziyamkhathaza izinkulumo zokuthi abaholi bakuleli bayambandaza uma kumele baphumele obala ngesimo esiqhubeka ezweni okwenza nabo bangazazi ukuthi bamiphi.
“Thina sinenhlanhla ngoba sihlala endaweni enabantu abacabanga ngokuhlukile iningi layo elisebenzayo njengalapha eHillcrest, eKloof, naseWaterfall ngoba maningi amathuba emisebenzi,” Uthi iqiniso ukuthi bakuleli ngenxa yosizi olukhungethe amazwe abo njengezimpi nendlala ngakho kuleli kungcono kakhulu. Lapho kusebenza khona uWhembolua kunabahlanu abangabokufika okukhona ophuma eTanzania, eZimbabwe, eMozambique naseDRC nabayisikhombisa bakuleli kodwa kuvunguza umoya wokuthula naphezu kokuba kwezinye izingxenye zezwe isimo sishubile phakathi kwabokufika nabakuleli. Abakuleli abacele ukungadalulwa bathi uHulumeni ne-ANC bangamaxoki odabenoi labokufika ngoba bakhuluma ulimi olumbaxambili. Kukhona abathi uHulumeni uyazi kahle inkinga yalezi zigameko kodwa uyayiziba ngoba akafuni ukuya kubantu emazingeni aphansi eyozizwela okuqhubekayo.
Kuleli sonto ithimba longqongqoshe bezokuphepha elihlanganisa uMnyango Wezamaphoyisa, oWezobunhloli, oWezobulungiswa noWezokuvikela livumelene ngokuthi izigameko zokuhlaselwa kwabokufika sezigubuzelwe inhlese yobugebengu kunezikhalo ebezibekwa umphakathi phambilini zokuthi abokufika yibona abanikwa imisebenzi ngoba baholelwa kancane futhi benza noma yiluphi uhlobo lomsebenzi ngoba behluphekile.
Ngesikhathi kuqubuka lezi zigameko ngoNdasa nonyaka leli phephandaba lakhuluma nabanye bokufika njengoMnu u-Agreement Dos ongowokudabuka eMozambique owafika kuleli ngowe-1979 owaveza ukuthi ukwazi kahle kamhlophe ukuhlalisana nezinhlanga ezehlukene kodwa eyokuhlaselwa kwabokufika nezitolo zabo akumele ibukwe ngeso lokubacwasa. Waveza ukuthi ukwanda kobugebengu ezweni kunomthelela ekuqubukeni kwezigameko zokuhlaselwa kwabokufika ngoba wonke umuntu ufuna impilo engcono. Ngesikhathi leli phephandaba likhuluma noDos Santos lezi zigameko zazidla lubi KwaZulu-Natal njengoba kulokhu zimandla kakhulu eGauteng.
Khonamanjalo ucwaningo olwenziwa uMqondisi Wesifunda iWest and Central Africa uRichard Danziger ngasekupheleni konyaka odlule lwaveza ukuthi abantu abayisigidigidi emhlabeni bahlala emazweni abangazalelwa kuwo ngezizathu ezehlukene. UDanziger uthi akukho ukungabaza ekutheni udaba lwabantu bokufika emazweni lugubuzele amazwe wonke omhlaba futhi luyiva okunzima ukulibangula. Kulesi sibalo abantu abayizigidi ezingama-250 basuka emazweni abo baye kwawaphesheya kwezilwandle, kokunye kube ukuphambana. Ngokusho kukaDanziger ngonyaka odlule akukho nelilodwa izwe elalingazishaya isifuba ngokuthi alinabo abantu abaphuma emazweni angaphandle abahleli kulo ngokungemthetho. Amazwe anabantu abawafulathela kakhulu angaphansi kwe-Economic Community of West African States (Eccowas), okungamazwe ali-15 asenhla ye-Afrika. Kulesi sifunda izinga labantu abangasebenzi lingama-20% okusho ukuthi maningi amathuba okuthi abantu bakhona bawelele emazweni aphesheya noma behlele ngezansi emazweni akuSouthern African Development Community (SADC) okungacishe amathuba emisebenzi khona abe ngcono. Ngesikhathi kwakhiwe umkhanya ngeNingizimu Afrika kulandela ukuhlaselwa kwezitolo zabokufika kushaqwe impahla enye icekelwe phansi okuwumkhankaso osuneminyaka wokuba uHulumeni angenelele ukuze babuyiselwe emazweni abo, akekho okhuluma ngokwenzeka eTanzania lapho uHulumeni wakhona esememezele ukuthi bonke abokufika abaphuma eBurundi kumele babuyele emakhaya ngoLwezi nonyaka. ITanzania yaziwa njengezwe elavula izandla kunzima ngesikhathi amazwe amaningi ase-Afrika eseNingizimu njengeNingizimu Afrika, iMozambique, iNamibia, esalwela inkululeko. Kwakunezinkambu zababephuma ngaphandle ngesikhathi izwe lisabuswa uMengameli uJulius Nyerere.
Ngokwezibalo balingaselwa ezi-342 867 abantu baseBurundi abahlala eTanzania ezinkanjini ezintathu okukhona eseNyarugusu, eNduta naseMtendeli.
Kusomqulu wezethembiso zokhetho wezi-2005 weqembu elibusayo iChama Cha Mapinduzi okunye okwakugqamile ukuguqula izwe ngokuthi babe bengasekho abantu basemazweni angaphandle ngowezi-2010.
Kulokho uHulumeni kaMengameli uBenjamin Mkapa wazithethelela ngokuthi okwenza bafune ukuthi abantu babuyele emazweni abo yingoba abalutholi usizo emazweni angaphandle acebile futhi kwakha nesithombe sokuthi isimo sezokuphepha emingceleni yabo siyantenga, nokuthi amazwe angomakhelwane anobohlobo nabo agcina esechaphazeleka ngokuthutheleka kwabantu abaningi abaphuma ngaphandle ngoba abanye bagcina bengene kuwo ngokungemthetho. Isiqubu sakamuva sokubuyiselwa kwamantu emazweni abo nguHulumeni waseTanzania asisisha. Ngonyaka odlule leli lizwe laphuma esivumelwaneni esaziwa nge-United Nations Comprehensive Refugee Response Framework lapho amazwe ezibophezela khona ekuhlonipheni amalungelo abantu bokufika nabacashile futhi azibophezele nasekwesekeni lawo mazwe anabantu bokufika.
Ngaphandle kwabantu baseBurundi, abanye abantu abagcwele eTanzania ngabasuka eDemocratic Republic of Congo (DRC), eMozambique naseCongo Brazaville ababalekela izimpi kulawa mazwe.
Okuthiwa kubonakala njengomthelela wokugcwala kwabantu baseBurundi emazweni amaningi angomakhelwane okuhlanganisa iTanzania kwaba yisinqumo sikaMengameli wakhona uPierre Nkurunziza sangowezi-2015 sokufuna ukuqhubeka nokuhlala esihlalweni ihlandla lesithathu nakuba uMthethosisekelo wakhona wawuphikisana nalokho.
UNkurunziza waguqula uMthethosisekelo kwaba ukuqubuka kwempi yomkhaya kukhona ababengahambisani nhlobo nalokho. Abaphuma eDRC babaleka ngesikhathi owayenguMengameli uMnu uJoseph Kabila naye ehlehlisa ukhetho okwaze kwaqubuka udlame kwafa abantu. OkwaseTanzani kwehlukile ngoba abokufika abakhona abanikwa ithuba lokukhetha ukuthi bayafuna yini ukuhamba noma bahlala ngenkani ezweni.
UNgqongqoshe Wezangaphakathi eTanzania uMnu uKangi Lugola useshilo ukuthi ngesonto bazobuyisela abantu abayizi-2 000 emazweni abo iningi okuzobe kungabaseBurundi. Isenzo seTanzania asehlukile kwesamazwe anjenge-United States of America, iFrance, iHungary, i-Australia ne-Italy enza izivumelwano nabantu abakuwona ngokungemthetho ukuthi babuyiselwe emuva.
Uma bebanjwe beqa imingcele bayahlawuliswa futhi sekunezindawo eseziphendulwe iziqiwu okucacayo nje ukuthi inhloso yazo ukuthi abawela ngokungemthetho baphenduke ukudla kwezilwane.